Google Nexus 5x ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Google Nexus 5x ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါကို Nexus 5x တစ်တောက်ပဖုန်း, သာအသေးအဖွဲ, အားနည်းချက်တွေနှင့်အတူ. အကြီးမားဆုံး lackluster ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်. ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ကြာ, ဒါပေမဲ့နောက်တဖန်မ, စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည့်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Google က Nexus ကို 5x ပြန်လည်သုံးသပ်: ထိုလူရဲ့ Android ဖုန်း?” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, သောကြာနေ့ 23 အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2015 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါကို Nexus 5x Google ရဲ့အသစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Android ရဲ့သေးငယ်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါသည် 6.0 Marshmallow စမတ်ဖုန်း, လူတိုင်းအဘို့ဖုန်းအဖြစ်ငွေကောက်ခံသည်. ဒါဟာအကြီးအကကင်မရာရှိပါတယ်, £ 339 များအတွက်လက်ဗွေ sensor နဲ့ 5.2in screen ကို.
ကို Nexus ထုတ်ကုန် Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဖြင့် Google ၏လမ်းဖြစ်ကြောင်း, ထုတ်လုပ်မတူညီတဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်. Google ကရည်ရွယ်ထားအဖြစ်သူတို့က Android ကို run, ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ, နှင့်ပထမဦးဆုံး software ကို updates များကိုလက်ခံရရှိ.
အဆိုပါကို Nexus 5x ဖို့ကိုဆက်ခံသည် 2013'' ကိုယ့်ကို Nexus5- ယနေ့အထိ Google ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကို Nexus Device ကို - နှင့်တူ 2013 ခုနှစ်ရဲ့ Nexus စမတ်ဖုန်း, အ 5x LG ကအားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည်.
အဆိုပါကို Nexus5remade
အဆိုပါ 2013 ကို Nexus5ဘယ်ဘက်မှာ, လက်ျာအပေါ်သစ်ကို Nexus 5x. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာဆဲအတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းစမတ်ဖုန်းရဲ့, ယခုမူကားထက်တစ် 5.2in screen နဲ့တစ်ကြာကြာကိုယ်ခန္ဓာရှိပါတယ် ကို Nexus 5, သောကအောက်ခြေမှာတစ် front-facing စပီကာအတွက် fit ပေးနိုင်ပါတယ်. ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးစပီကာတစ်ခုစတီရီယိုတစ်စုံအဖြစ်အလုပ်မလုပ်ကြပါဘူး, ကံမကောင်းသဖြင့်.
ဒါဟာ 7.9mm ကိုယ်ထည်အထူ, ချောမွေ့ပျော့ပျောင်း-touch နဲ့ပလပ်စတစ်ဖုံးလွှမ်း, နှင့် 136g အလေးချိန်, ကပေါ့ပါးဆုံးထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းတယောက်လက်ရှိရရှိနိုင်အောင်. ထူသောအဆိုပါ 6.8mm Samsung ရဲ့ Galaxy S6, ဥပမာအားဖြင့်, 138g အလေးချိန်. အဆိုပါ iPhone ကို 6S 7.1mm အထူသည်နှင့် 143g အလေးချိန်.
ဒါဟာအတော်လေးအိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ် Galaxy S6 အဖြစ်ပရီမီယံအဖြစ်မခံစားရပါဘူး, သို့သော်၎င်း၏ပလပ်စတစ်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်, ပေါ်သို့ကျင်းပရန်လွယ်ကူ touch နှင့်တွေအများကြီးမှပူနွေးသော. ဘက်ခြမ်းမှာခလုတ်အနည်းငယ်အခြေခံပညာနှင့်စျေးပေါခံစားရ, ဒါပေမယ့်ဖုန်းခံစားချက်တွေကို၏ကျန်အလွန်ကောင်းစွာတည်ဆောက်.
အဆိုပါ 5.2in screen ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ 1080p resolution ကိုရှိပါတယ်, တစ်သိပ်သည်းဆ 423 လက်မနှုန်း pixels ကိုနှင့် pin ကိုချွန်ထက်သည်. အဆိုပါ Galaxy S6 ရဲ့ 5.1577ppi နှင့်အတူ 2K display ကိုအတွက်နည်းပညာပိုင်းပြတ်သားသည်, ဒါပေမယ့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားမှာခြားနားချက်ဆိုတာတွေ့ရဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်.
Screen ကို: 5.21080p LCD ကိုအတွက် (423ppi)
သိုလှောင်ခြင်း: 16 သို့မဟုတ် 32GB
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 6.0 Marshmallow
ကင်မရာကို: 12.3လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 5အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 4.2, ကို USB-C နှင့် GPS စနစ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 147.0 x က 72.6 x က 7.9 မီလီမီတာ
အဆိုပါစမတ်ဖုန်းကိုတုံ့ပြန်မှုသည်, အင်္ဂါရပ်ကြွယ်ဝ, ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကို Nexus 5x Qualcomm ရဲ့ Snapdragon ကိုအသုံးပြုသည် 808 Hexa-Core Processor ကို, မျဉ်း Octa-core ကို၏မကုမ္ပဏီ၏ထိပ်တန်း 810. ဒါဟာ LG ကမှာအသုံးပြုကြောင်းတူညီတဲ့ processor ကိုဖွင့် G4 အလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုမှ.
အဆိုပါဖုန်းကို snappy ခံစား, apps များ switching လျင်မြန်စွာဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့လက်ရှိရရှိနိုင်အတော်လေးအမြန်ဆုံး-feeling Android စမတ်ဖုန်းမဟုတ်င်စဉ် - က Galaxy S6 ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ - ကကြွင်းသောအရာ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူတန်းတူအပေါ်ဖြစ်ပါသည်.
တကယ်တော့, ငါသာအမာခံဂိမ်းကစားပင်ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်အမြန်ဆုံး Processor ကိုမဖွင့်ကိုသတိပြုမိသာပြိုင်ဘက်သုံးလေးရှိလာတဲ့အခါ RAM ကို 2GB ရှိပါတယ်လိမ့်မည်ဟုဆိုရချင်ပါတယ်. အဘို့ပစ်ခတ်မှုကြယ်ကစားစဉ်ကတောင်ပူနွေးမရ 30 မိနစ်.
က Nexus 5x အားနည်းသည်အဘယ်မှာရှိတဧရိယာဘက်ထရီသက်တမ်းသည်. ငါ၏အစမတ်ဖုန်းစမ်းသပ်ခုနှစ်တွင်ပျမ်းမျှတနေ့ကြာ, ဒါပေမဲ့သာရုံ. ငါနှင့်အတူအလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတာ 30% ထိုသို့နေဆဲရှိသည်မယ်လို့ 10% ငါနောက်နေ့နိုးအချိန်မှာ. ထွက်တစ်ဦးကညဉ့်ကန့်သတ်ဖို့ကတွန်းအားပေးမယ်လို့. ကိုယ်ကသာဖြစ်ပါသည် ပဲ လုံလောက်တဲ့ကောင်းသော, တစ်နှစျတှငျမဖြစ်စေခြင်းငှါ.
Google ရဲ့ အသစ် Doze စနစ်က ကြော်ငြာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်. ငါနှင့်အတူအိပ်ရာမှသှားလြှငျ 10% ဘက်ထရီငါနှင့်အတူနိုး left 8% mode ကိုချွေတာဘက်ထရီကိုသက်ဝင်ခြင်းမရှိဘဲနောက်နေ့.
ငါသည်ငါ့မူလတန်း device ကိုအဖြစ်အသုံးပြု, အီးမေးလ်များရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ, ကြွလာတော်အကြောင်းကြားစာများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများတွန်းအားပေး, 2.5 ကြည့်ရှုခြင်း၏နာရီ, Bluetooth ကိုနားကြပ်ကနေတဆင့်သီချင်းနားထောင်၏ငါးနာရီ, ပတ်ပတ်လည် 20 ဂိမ်းနှင့်တစ်နေ့လျှင်ဓါတ်ပုံများ၏စုံတွဲတစ်တွဲ၏မိနစ်.
ကို USB-C ကို
ကို USB-C ကိုမြို့အတွက်အသစ် connector ကိုဖြစ်ပါတယ်, သုံးစွဲဖို့ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်စမတ်ဖုန်းများအနှံ့အသုံးပြုသောသစ်စံဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်သော, tablet နှင့်ကွန်ပျူတာများကို. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကို Nexus 5x သစ်ရှိပါတယ် USB မှတ်အမျိုးအစား-C ကို charging port ကို, တစ်ခုခုကိုလမ်းဖွင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးအစိုင်အခဲများနှင့်စိတ်ကျေနပ်စရာသုံးစွဲဖို့ microUSB ထက်ခံစားနိုင်သည့်. ဒါဟာပထမဦးဆုံးနှင့်အတူစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် Google ရဲ့ Chromebook Pixel. ထိုအပါအဝင်အခြားဖုန်းများ OnePlus2လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်.
အ OnePlus မတူဘဲ 2, က Nexus 5x လျင်မြန်စွာအားသွင်းရောက်ရှိခဲ့သည် 80% ၎င်း၏အလျင်မြန်ဆုံးနှုန်းမှာတစ်နာရီအတွက်. အကြီးမားဆုံးကျဘက်ကိုသင် box ထဲမှာကို USB-C ကို cable ကိုမှ LG ကအဖြစ်အချို့သောအပိုကေဘယ်ကြိုးတွေကသာသင်္ဘောများက USB-C ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်, သောသငျသညျဖွယ်ရှိသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ plug နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဆိုလိုသည်.
တစ်ဦးစံကို USB (တစ်ဦးက) £ 10 န်းကျင်ကို USB-C ကို cable ကိုကုန်ကျစရိတ်မှ.
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးက Nexus ထက်အထူးသပိုကောင်းခဲ့ 6. အဆိုပါကို Nexus 5x LED သတိပေးချက်တစ်ခုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားသည်. ငါပတ်ဝန်းကျင် display ကိုအကြောင်းကြားစာ system ကိုသုံးတဲ့အခါကိုယ်ကမလိုအပ်ခဲ့တွေ့ရှိရ, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီကိုကယ်တင်မယ့်အစားကိုအသုံးပြုနိုင်မည်.
Android မှာ 6.0 Marshmallow
အခုကိုအသာပုတ်ပေါ်မှာ Android ကိုတစျဦးဖွစျသညျ 6.0 Marshmallow ရဲ့ features အသစ်, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ရှာဖွေမှုများကို Google အတွက်မျက်နှာပြင်စစ်ဆေးပြီးသော. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကို Nexus 5x ၏ Google ရဲ့နောက်ဆုံး version ကိုပြေးရရှိနိုင်ပါပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Android မှာ 6.0 Marshmallow. က Nexus ကင်မရာနဲ့ Nexus Imprint လုပ်လက်ဗွေစကင်နာထက်ကျော်လွန်က Nexus 5x မှထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်းမရှိ software features တွေရှိပါတယ်.
Marshmallow ချောချောမွေ့မွေ့ပြေး, ကောင်းစွာ optimized နှင့်ကက Nexus 5x များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့လျှင်အဖြစ်ခံစားရသည်, သောကဖြစ်.
ကိုအသာပုတ်ပေါ်မှာ Google Now ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို, Doze နဲ့ app standby ဘက်ထရီချွေတာ features တွေ, နှင့် Android ၏ကျန် 6.0 Marshmallow ဖတ်:
Google က Android 6.0 Marshmallow ပြန်လည်သုံးသပ်: ပိုပြီးပွတ်, ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကြာကြာဘက်ထရီသက်တမ်း
အဆိုပါလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာပဲကင်မရာအောက်ကဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာနေရာယူထားသည်, သင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုလက်ညှိုးသဘာဝကျကျတည်ရှိသည်ျာဘယ်မှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကို Nexus Imprint လုပ် sensor ကိုငါနေ့စွဲဖို့အသုံးပြုထားသောအကောင်းဆုံးလက်ဗွေစကင်နာသည်. ဒါဟာချက်ချင်းငါ့အလက်ညှိုးကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အနီးနှင့်အတူဖုန်းကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးတယောက်င် 100% ဟုတ်မှန်ရေး.
နောက်ကျောအပေါ်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကို, ကင်မရာကိုအောက်တွင်, device ကိုကိုင်သောအခါအရာကြွင်းလေသမျှရန်သင်၏လက်ညှိုးများအတွက်သဘာဝနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ငါရိုးရိုးလေးကတက်ကောက်နေသဖြင့်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်တွေ့ကဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာသောအခါငါက drop သွားခဲ့သည်တူငါခံစားရတယ်ဘယ်တော့မှ, ငါအိမ်ပြန် button ကိုစတိုင်လက်ဗွေစကင်နာများနှင့်အတူပြုပြီးသကဲ့သို့.
တဘက်ကိုကြောင့်လက်ဗွေရာနှင့်အတူစားပွဲပေါ်အပြားသည်အခါသင် device ကိုသော့ဖွင့်မရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါပေမဲ့သင်ရုံတစ် pin ကိုအတွက်သာပုတ်နိုင်သည်, အစားကသော့ဖွင့်ဖို့စကားဝှက်သို့မဟုတ်ပုံစံ.
Marshmallow ဖုတ်-in ကိုလက်ဗွေစကင်နာများထောက်ခံကြောင်းဆောင်တတ်၏, သောကြီးမြတ်တဲ့ third-party app ကိုအထောက်အပံ့လာကြလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်. သင်ဤအရည်အသွေးကတစ်လက်ဗွေစကင်နာကိုသုံးပြီးတာနဲ့သင်ပြန်တဲ့ pin ကိုအတွက်ပုတ်ကိုသွားချင်တယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်.
အဆိုပါ Google ကင်မရာ app ကိုအလုပ်ပြီးပြီရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်, နှင့်အများဆုံး feature ကိုကြွယ်ဝမဟုတ်ပါဘူး ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အသစ်က Nexus ကင်မရာကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည် - အလွယ်တကူအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခု, အကယ်. မငါစမတ်ဖုန်းအပေါ်ကိုသုံးမှနှစ်သက်ခဲ့ကြတာအကောင်းဆုံးကင်မရာကို. ကောင်းသောအလငျး၌ဓါတ်ပုံထဲမှာဖမ်းမိအသေးစိတ်အဆင့်စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်, အပြည့်အဝအရွယ်အစားအထိလွသောအခါများစွာသောအခြားပြုပါသော Over-ပြတ်သားသို့မဟုတ် artefacts အဘယ်သူအားမျှခံစားနေရ. သဘာဝကအဖြူနှင့်ချိန်ခွင်လျှာအစိုင်အခဲခဲ့ခဲ့ကြသည်အရောင်များ.
ငါအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက် autofocus snappy နှင့်တိကျမှုဖြစ်တွေ့ရှိ, နှင့်မက္ကရိုရိုက်ချက်များအထူးသဖြင့်ကောင်းသောကြည့်ရှု.
အနိမ့်အလငျး၌ငါနိုင်စွမ်းကိုတွေ့, မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်မျိုးအတွက်ကောင်းသော-ရှာဖွေနေဓာတ်ပုံများထုတ်လုပ်အများဆုံးဓါတ်ပုံထဲမှာဖမ်းမိနေကြတယ်. အားလုံးစမတ်ဖုန်းကင်မရာလိုပဲတကယ့်ကိုအလွန်မှိန်အလင်း၌ရုန်းကန်.
အကြီးမားဆုံးပြဿနာကကင်မရာ app ကိုအနည်းငယ်နှေးကွေးဖြစ်ပါတယ်. HDR ဓါတ်ပုံများရိုက်ကာမှန်မှန်လက်နှင့်တစ်ဦးဒုတိယရဲ့သည်းခံခြင်းကြာ, ဥပမာအားဖြင့်. ဒါဟာချောမွေ့ဗီဒီယိုကြာမြင့်ခြင်းနှင့် 120FPS အနှေးပြကွက်လိုလုပျနိုငျ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် 30fps မှာ 4K.
အဆိုပါ front-facing selfie ကင်မရာကတစ်ဦးလေးစားဖွယ်အလုပ်ကိုပြု, နှင့်အလယျပိုငျးအလငျး၌အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသောအသေးစိတ်နှင့်အတူ SNAP ထုတ်လုပ်. ပါဝါခလုတ်ကိုကင်မရာ app ကိုလွှတ်တင်ကို Double-နှိပ်, သောကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်.
ဤသည်၏အချက်တစ်ခုအားဖြင့်တစ်ဦးကို Nexus device ကိုမှတပ်ဆင်တာအကောင်းဆုံးကင်မရာ 10 နှင့်အရာကြွင်းလေအကောင်းဆုံးနှင့်အတူတက်အဲဒီမှာအလွယ်တကူဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးကအဖြူကို Nexus 5x. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကို Nexus 5x သုံးအရောင်များလာ, အနက်ရောင်, အဖြူနှင့်ရေခဲ (ဘဲကြက်ဥအရောင်များ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ) နှင့်သိုလှောင်မှု 16GB Google ထံမှ£ 379 များအတွက်£ 339 သို့မဟုတ် 32GB ကုန်ကျတစ်ခုခုကိုနှင့်အတူ.
နှိုင်းယှဉ်, ထို Samsung ရဲ့ Galaxy S6 သိုလှောင်မှု 32GB နှင့်အတူလက်ရှိတွင်£ 390 ကုန်ကျ, အ 32GB Sony Xperia Z5 £ 540 ကုန်ကျ, နှင့်တစ်ဦး 16GB ကို iPhone ကို 6S £ 539 ကုန်ကျ. အဆိုပါ 16GB OnePlus2£ 239 ကုန်ကျ.
ကင်မရာကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, လက်ဗွေစကင်နာစိတ်ကူး, ဒါကြောင့် snappy င်, အလွန်ကြီးစွာသောမျက်နှာပြင်ရှိပြီး 5.5in ထက်ပိုကြီးတဲ့ Screen ကိုအတူဖုန်းများကလွှမ်းမိုးနေတဲ့စမတ်ဖုန်းရှုခင်းအတွက်အလင်းနှင့်အတော်လေးသေးငယ်နှစ်ဦးစလုံးသည်.
ဒါဟာကောင်းစွာအနာဂတ်-သက်သေပြမယ့်, ခွဲကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်၏မရှိခြင်းကနေ, နှင့်မြတ်သောတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကို Nexus 5x ငြင်းခုံဖွယ်ဝန်းကျင်£ 350 အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းသည်, သိုလှောင်မှု 16GB ပဲမလောက်မဖြစ်သကဲ့သို့ပေမယ့် 32GB version ကိုဝယ်ခြင်း.
အကောင်းအဆိုး: မြတ်သောကင်မရာက, စိတ်ကူးလက်ဗွေစကင်နာ, အလွန်ကြီးစွာသောမျက်နှာပြင်, ကောင်းတဲ့ခံစားရ, အလင်း, Android မှာ 6.0 Marshmallow, snappy
Cons: ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, microSD card slot နှင့်သိုလှောင်မှု 32GB ထက်ပိုပြီးအဘို့အဘယ်သူမျှမ option ကိုအဘယ်သူမျှမ, အဘယ်သူမျှမကိုကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, သာ box ထဲမှာကို USB-C ကို cable ကိုမှကို USB-C ကိုနှင့်အတူကြွလာ
ambient display ကို mode ကိုမျက်နှာပြင်အပေါ်တစ်ဦးအနိမ့်အာဏာကိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် mode မှာအကြောင်းကြားစာများပြသထားတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Motorola က Moto X ကို Play စပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်နည်းနည်းလျော့နည်းများအတွက်လျောက်ပတ်သောသဘင်
LG က G4 ပြန်လည်သုံးသပ်: ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး phablet တယောက်, တစ်ဦးအထင်ကြီးကင်မရာကိုဝါကြွားခြင်း
Google ၏ Nexus6ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ကြီးမားသောအဆင်းလှသောအစ်မဖြစ်, ဒါပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲမ
OnePlus2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: တကယ့် '' စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Phablet ကိုလူသတ်သမား ''?
Sony Xperia Z5 ပြန်လည်သုံးသပ်: ကောင်းသောဒါပေမဲ့ခြွင်းချက်မ
Samsung က Galaxy S6 Edge + ပြန်လည်သုံးသပ်: အ curvy '' iPhone ကို6ပိုများသောလူသတ်သမား ''
အက္ခရာ, Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Google က, LG က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ
← အက်စပရင်ကိုမေလအကူအညီကာကွယ်ကင်ဆာ ! HTC One ကို A9 [VIDEO] →